६ महिना अगाडि नेपाल आएका योगी आदित्यनाथले भनेका थिए– राजा किन हटाएको ? - Ratopati
६ महिना अगाडि नेपाल आएका योगी आदित्यनाथले भनेका थिए– राजा किन हटाएको ?
चैत्र ७ काठमाडौं – हिन्दु कट्टरपन्थी योगी आदित्यनाथ भारतको सवैभन्दा ठूलो राज्य उत्तरप्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । नेपालको सीमा जोडिएको उत्तरप्रदेशमा राजसंस्था र हिन्दु राज्यको पक्षमा लागेका व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनेपछि नेपालमा राजसंस्था र हिन्दु राज्यका पक्षपाती उत्साही पनि बनेका छन् ।
गोरखपुरस्थित गोरखनाथपीठका पीठाधीश भारतीय जनता पार्टीका सांसद योगी आदित्यनाथ गत कार्तिकमा काठमाडौंमा भएको हिन्दु महासम्मेलनमा सहभागी भएका थिए, जुन सम्मेलनको सूत्रधार उनलाई नै मानिएको थियो ।
वनकालीको विश्व सम्मेलनमा भाजपा अध्यक्ष अमीत शाहले आफ्नो दलको प्रतिनिधिका रूपमा आदित्यनाथका अतिरिक्त भाजपा नेता रघुनन्दन शर्मालाई पनि पठाएका थिए । भाजपामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अध्यक्ष शाह र आदित्यनाथको राजनीतिक लाइन एउटै हो ।
सम्मेलनमा अमीत शाहको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भाजपा नेता रघुनन्दन शर्मा सहभागी भएका थिए । त्यसबेला नेपाल आएका आदित्यनाथले एक साप्ताहिक पत्रिकालाई दिएको छोटो अन्तर्वार्तामा खुलेरै राजसंस्था र हिन्दु राज्यको कुरा गरेका छन् ।
कार्तिक पहिलो साता भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन आदित्यनाथको नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्ता यस्तो छ
‘हाम्रो मिसन हिन्दु राजा, हिन्दु प्रजा’ – योगी आदित्यनाथ, भाजपा सांसद तपाईंको नेपाल मिसन के हो ?
हामी नेपालमा पुरानो पहिचान पुन:स्थापना गर्ने आन्दोलनमा छौँ । बेलायत, थाइल्यान्डले राजा राखेर प्रगति गरेका छन् । यहाँ राजा किन हटाएको ?
तपाईं भाजपाको सांसद पनि हुनुहन्छ, के भाजपा पनि राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छ ?
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पार्टी अध्यक्ष अमीत शाह दुवै जना नेपालमा शान्ति र स्थिरता चाहनुहुन्छ । यो सम्मेलनमा उहाँहरूले सफलताको शुभकामना दिनुभएको छ र अध्यक्षको प्रतिनिधिका रूपमा भाजपाका नेता रघुनन्दन शर्माजी सहभागी हुनुहुन्छ । उहाँले हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु पहिचान कायम गर्न प्रस्ट मन्तव्य दिनुभएको छ । त्यसको अर्थ नेपालमा हिन्दु राजसंस्था स्थापनाको चाहना समग्र भारत र भारतवासीको मात्र होइन, संसारका हिन्दुहरूको हो ।
हिन्दु अधिराज्य बन्न सम्भव छ र ?
नेपालको राजसंस्था एकता र भ्रातृत्वको प्रतीक हो । राजा संसारभरिका हिन्दुका सम्राट् हुन् । राजा हिन्दु पहिचानका प्रतीक हुन् । संविधानमा राखिएको धर्मनिरपेक्षता शब्द विकृत मानसिकताको उपज हो । नेपालको वास्तविक पहिचान हिन्दु हो । हिन्दु पहिचानका प्रतीक राजा हुन् । हिन्दु राजा, हिन्दु प्रजा नेपालको अस्तित्व हो, त्यो कायम हुनुपर्छ । हामी यसका लागि सक्रिय छौँ ।
गणतन्त्र संस्थागत भएको देशमा धर्मको नाममा राजनीति गर्नु हुन्छ ?
नेपाल सनातन हिन्दु राष्ट्र हो । भगवान् गोरखनाथको कृपा नेपाल राज्य र यहाँको राजसंस्थाप्रति रही आएको छ । हामी चाहन्छौँ नेपाल एक होस्, स्वतन्त्र होस् र सुरक्षित होस् । त्यसको लागि हिन्दु पहिचान पुन:स्थापना हुनुपर्छ । भारत र नेपाल दुईवटा शरीर हुन् तर आत्मा एउटै छ । त्यो आत्मा हिन्दुत्व हो । भारत र नेपालको साझा सांस्कृतिक विरासत भएको हुनाले हिन्दुत्वको रक्षा गर्न दुवै देशका हिन्दुहरू एक जुट हुनुपर्छ ।
सेना परिचालनप्रति जनमुक्ति पार्टीको आपत्ति
काठमाडौं, वैशाख १६– सरकारले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णयको राष्ट्रिय जनमुक्ति ..
किराँतीको आरोपः एमाले ज्ञानेन्द्रलाई सिंहासनमा फर्काउन सक्रिय
काठमाडौं, बैशाख १६– सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता गोपाल किराँतीले संविधानलाई असफल बनाएर ..
‘कमिसनको खेलमा हतारहतार मतपत्र छापियो’
सुमन भन्छन्– अब कार्तिकमा चुनाव गर्नुपर्छ काठमाडौं, वैशाख १६– नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता मनिष स..
राप्रपाले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने
काठमाडौं, वैशाख १६– सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदमा पेश गरिएको संशोधन विधेयकको पक्षमा नै मतदान ..
सात वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन : ऊर्जामन्त्री शर्मा
लुम्बिनी, वैशाख १६ – ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सात वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको..
दोस्रो चरणको निर्वाचनले ओखलढुंगाका राजनीतिक दललाई हाइसन्चो !
रामहरि श्रेष्ठ ओखलढुंगा, बैशाख १६– विभिन्न जिल्लामा स्थानीय तह निर्वाचनका आकांक्षी धेरै भएपछि दलहरुबीच नै मारा..
राजनीतिलाई पेशा बनाएर विना लगानी करोडपति हुने प्रवृत्ति बढ्योः बाबुराम
काठमाडौं, बैशाख १६– नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सदाचारयुक्त राजनीतिको लागि नयाँ शक..
सरकारको अर्जुनदृष्टि निर्वाचन र संविधान संशोधन
काठमाडौँ, १६ वैशाख । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लोकतन्त्रको प्राणवायु निर्वाचनलाई जसरी पनि सफल प..